जनताको सेवामा - व्यंग्य - प्रकाशितः आश्विन ५, २०७६ - नेपाल
स्थानीय सरकारका पदाधिकारीले तलबभत्ताबाहेक पौने अर्ब रुपैयाँ गैरकानुनी हजम गरेको र सो रकम बेरुजु कायम गरी असुलउपर गर्नू भनेर महालेखाले स्थानीय निकायलाई निर्देशन दिइटोपलेछ । जनताका प्रतिनिधि, त्यो पनि पक्ष-प्रतिपक्ष सबैले सर्वसम्मत निर्णय गरी मिलिजुली खाएको । यसरी मिलाएर खाएको, लाएको र पचाएको फिर्ता गर भन्नु कस्तो हास्यास्पद ! जनताले तिरेको करबाट जनताकै लागि जनताकै प्रतिनिधिले खाए । यसमा कसैलाई किन ज्वरो आउनू ! जनताका प्रिय प्रतिनिधिले त्यसरी लाएको, खाएको र पाएकामा केही पत्रकार बारम्बार उनीहरुका विरुद्ध समाचार बनाएर समाजलाई भड्काउने प्रयास गरिरहेका छन् । केही गरी समाज भड्के पनि हाम्रा जनप्रतिनिधि भड्किने छैनन् । उनीहरु खानबाट पछि हट्ने छैनन् । यतिको अडानचाहिँ उनीहरुले कायम गर्नेछन् भन्ने अनुभव हामीले बितेका दुई वर्षमा गरिसकेका छौँ ।
जनप्रतिनिधिले कानुनमै नभएको पोसाक शीर्षकमा करोडौँ रकम बुझेको भनेर केही पत्रिकाले लेखे । कानुनमा छैन भन्दैमा पोसाक नलगाई उनीहरूले घरबाहिर निस्कन मिल्छ त ? जनताको सेवामा राम्ररी ध्यान दिनका लागि हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई कम्तीमा सुट, टाई, दौरा-सुरुवाल, कोट, धोती, सारी त सरकारले दिनैपर्छ । त्यसमा थप पेटिकोट, जुत्ता, मोजा कट्टु, धोती र गर्मीमा घर बस्दा लगाउने हाफपाइन्ट पनि चाहिन्छ । रातबिरात जनताको सेवामा खटिने जनप्रतिनिधिलाई सिरक, डसना, तन्ना, झुल, छाता, टर्चलाइट आदि पनि दिनुपर्छ । काइँयो, कपालमा लगाउने तेल, नेल कटर, लिपिस्टिकलगायत प्रसाधनका सामानका लागि पनि रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । खल्तीको खर्च गरेर जनताको काम गर्ने कुरा अन्यायपूर्ण हुन्छ । जनप्रतिनिधि नै अन्यायमा परे भने जनतालाई न्याय कसले दिन्छ ?
संघीयतामा सधैँ सरकारको मुख हेरेर हुँदैन, आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउनुपर्छ । आफूलाई चाहिने सुविधा आफैँले निर्णय गरेर लिनुपर्छ । मोटर, मोटरसाइकल, स्कुटर, ल्यापटप, मोबाइल, क्याल्कुलेटर इत्यादि स्रोत-साधन उपकरण लिइसक्नुभएकै होला । छैन भने लिनुहोला । घर नहुने जनप्रतिनिधिले घरै नत्र घरभाडा लिने निर्णय गर्नुहोला । घर छ भने मर्मतसम्भार खर्च लिने निर्णय गर्नुपर्छ । महँगीले कर्मचारीलाई भन्दा बढी जनप्रतिनिधिलाई सताउँछ । निर्णय गरेर महँगी भत्ता लिनुहोला । जनप्रतिनिधि भएपछि अनेकौँ काम गराउन नागरिक आउँछन् । उनीहरुलाई चिया खुवाउनुपर्छ, कहिलेकाहीँ त बासै बसाउनुपर्छ । पाहुना भत्ता झन् आवश्यक देखिन्छ । औषधोपचार खर्च त लिइसक्नुभयो होला ।
जनताको सेवामा समर्पित हुन जनप्रतिनिधिले यी सबै प्रकारका सेवा-सुविधा लिन हिचकिचाउनु, लजाउनु हुँदैन । डाह गर्नेहरुले गर्दै गर्छन्, खान नपाउनेहरुले दाह्रा किट्दै गर्छन्, खान छाड्नु हुँदैन । विकास निर्माणका काममा मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष, सदस्यज्यूहरु एकआपसमा जतिसुकै गाँड कोराकोर गर्नुस्, टाउको फोराफोर गर्नुस्, तालाबन्दी, नाकाबन्दी गर्नुस् तर तलब-भत्ता, कपडा-लत्ता, टोपी-जुत्ता, गन्जी-ब्लाउजलगायतका सेवासुविधा थप्ने, बढाउने विषयमा सदा मेलमिलापको नीति अपनाउनुस् । एक बारको जुनीमा यस्तो सुखद पाँच वर्ष फेरि आउँछ-आउँदैन, के थाहा, त्यसैले झोली राम्ररी भर्नुस्, भोलि सुरक्षित गर्नुस् । यो दसैँमा सबैलाई कम्तीमा एक-एक वटा खसी, च्यांग्रो, पाडो, नयाँ लुगा र दक्षिणाभत्ता लिने निर्णय गर्नुभयो ? छैन भने गर्नुस् । महालेखा कराउँदै गर्छ, खानेकुरा पच्दै गर्छ । जनताको सेवाका लागि खान नछाड्नुस् । विजया दशमीको मंगलमय शुभकामना ।